Mhuka dzakachena nedzisina kuchena (1-47)
11 Jehovha akabva ati kuna Mozisi naAroni: 2 “Udzai vaIsraeri kuti, ‘Izvi ndizvo zvisikwa zvipenyu zvepanyika zvamunogona kudya:+ 3 Mhuka yese ine mahwanda* akaparadzana, akavhurika pakati uye inodzeya inogona kudyiwa. 4 “‘Asi hamufaniri kudya mhuka idzi dzinodzeya kana kuti dzine mahwanda akaparadzana: ngamera, nekuti inodzeya asi haina mahwanda akaparadzana. Haina kuchena kwamuri.+ 5 Uyewo mbira,+ nekuti inodzeya asi haina mahwanda akaparadzana. Haina kuchena kwamuri. 6 Uyewo tsuro, nekuti inodzeya asi haina mahwanda akaparadzana. Haina kuchena kwamuri. 7 Uyewo nguruve,+ nekuti ine mahwanda akaparadzana, akavhurika pakati, asi haidzeyi. Haina kuchena kwamuri. 8 Hamufaniri kutombodya chero nyama yazvo kana kuzvibata zvafa. Hazvina kuchena kwamuri.+ 9 “‘Izvi ndizvo zvamunogona kudya pazvinhu zvese zviri mumvura: Munogona henyu kudya+ chero chinhu chine zvimbi* nemakwati chinowanikwa mumakungwa kana munzizi. 10 Asi zvinhu zvese zviri mumakungwa nemunzizi zvisina zvimbi nemakwati, zviri pakati pezvisikwa zvese zvinofamba zvakawanda uye pakati pezvimwewo zvisikwa* zvese zvipenyu zviri mumvura, zvinhu zvinosemesa kwamuri. 11 Munofanira kusemeswa nazvo uye hamufaniri kudya chero nyama yazvo+ uye munofanira kuzvisema kana zvafa. 12 Zvinhu zvese zviri mumvura zvisina zvimbi nemakwati zvinhu zvinosemesa kwamuri. 13 “‘Izvi ndizvo zvisikwa zvinobhururuka zvamunofanira kusema; hazvifaniri kudyiwa, nekuti zvinosemesa: gondo,+ hungwe, gora dema,+ 14 ngavi tsvuku uye mamwe marudzi ese engavi nhema, 15 marudzi ese emakunguo, 16 mhou, zizi, shiri yemugungwa, marudzi ese erukodzi, 17 zizi diki, shambira, zizi rine nzeve refu, 18 dhadha remutsipa murefu, dhadha remuromo murefu, gora, 19 shuramurove, marudzi ese eshorechena, mhupupu, nechiremwaremwa. 20 Zvisikwa zvese zvine mapapiro zvinofamba zvakawanda,* zvinofamba nemakumbo ese mana zvinhu zvinosemesa kwamuri. 21 “‘Pazvisikwa zvese zvine mapapiro zvinofamba zvakawanda, zvichifamba nemakumbo ese mana, munogona henyu kudya zviya zvine mamwe makumbo azvinoshandisa pakusvetuka, akareba kupfuura azvinofamba nawo. 22 Munogona henyu kudya izvi: marudzi akasiyana-siyana emhashu dzinotama-tama, dzimwewo mhashu dzinodyiwa,+ makurwe, nehwiza. 23 Zvimwe zvisikwa zvese zvine mapapiro zvinofamba zvakawanda zvine makumbo mana zvinhu zvinosemesa kwamuri. 24 Izvi zvinokusvibisai. Munhu wese anozvibata kana zvafa achange asina kuchena kusvikira manheru.+ 25 Munhu wese anozvitakura kana zvafa anofanira kugeza nguo dzake;+ achange asina kuchena kusvikira manheru. 26 “‘Mhuka dzese dzine mahwanda asina kunyatsoparadzana pakati uye dzisingadzeyi, hadzina kuchena kwamuri. Munhu wese anodzibata achava asina kuchena.+ 27 Zvisikwa zvese zvine tsoka dzine nzara pazvisikwa zvese zvinofamba nemakumbo ese mana, hazvina kuchena kwamuri. Munhu wese anozvibata kana zvafa achava asina kuchena kusvikira manheru. 28 Munhu anozvitakura kana zvafa anofanira kugeza zvipfeko zvake,+ uye achava asina kuchena kusvikira manheru.+ Hazvina kuchena kwamuri. 29 “‘Izvi ndizvo zvisikwa zvisina kuchena kwamuri pazvisikwa zvinokambaira: nhuta, mbeva,+ marudzi ese emadzvinyu, 30 chipfira, gwavava, gwereveshe, chidhambakura, nerwaivhi. 31 Zvisikwa izvi zvinokambaira hazvina kuchena kwamuri.+ Munhu wese anozvibata kana zvafa achava asina kuchena kusvikira manheru.+ 32 “‘Chinhu chipi zvacho chinowirwa nazvo pazvinofa chichava chisina kuchena, ungava mudziyo wemuti, kana chipfeko, kana dehwe, kana saga. Mudziyo wese unoshandiswa unofanira kuiswa mumvura, uye uchava usina kuchena kusvikira manheru; wozova wakachena. 33 Kana zvikawira mumudziyo wevhu, munofanira kuupwanya, uye zvese zvanga zvirimo zvichava zvisina kuchena.+ 34 Zvekudya zvese zvinoendwa nemvura inobva mumudziyo iwoyo zvichava zvisina kuchena, uye chinwiwa chese chinenge chiri mumudziyo iwoyo chichava chisina kuchena. 35 Chese chinowirwa nechimwe chezvinhu izvi kana zvafa chichava chisina kuchena. Chingava choto kana chigadziko chehari, chinofanira kupwanywa. Izvo hazvina kuchena, uye zvicharamba zvisina kuchena kwamuri. 36 Chitubu netsime remvura ndizvo chete zvicharamba zvakachena, asi munhu anobata zvisikwa izvi kana zvafa achava asina kuchena. 37 Kana chimwe chazvo chakafa chikawira pambeu yekudyara, mbeu yacho ichange yakachena. 38 Asi kana mvura ikaiswa pambeu uye chimwe chezvisikwa izvi chakafa chikawira pairi choigunzva, mbeu yacho haina kuchena kwamuri. 39 “‘Kana mhuka inodyiwa ikafa, munhu wese anoibata achava asina kuchena kusvikira manheru.+ 40 Munhu wese anodya nyama yacho anofanira kugeza zvipfeko zvake, uye achava asina kuchena kusvikira manheru.+ Munhu wese anoitakura yakafa anofanira kugeza zvipfeko zvake, uye achava asina kuchena kusvikira manheru. 41 Zvisikwa zvese zvepanyika zvinonanaira zvinosemesa.+ Hazvifaniri kudyiwa. 42 Hamufaniri kudya chisikwa chinofamba nedumbu, chisikwa chese chinokambaira nemakumbo ese mana, kana tupukanana tunofamba nemakumbo akawanda, nekuti zvinosemesa.+ 43 Musaita kuti zvisikwa zvinofamba zvakawanda zvikuitei vanhu vanosemesa, uye musasvibiswa nazvo moitwa vasina kuchena.+ 44 Nekuti ndini Jehovha Mwari wenyu,+ uye munofanira kuzvitsaura mova vatsvene,+ nekuti ini ndiri mutsvene.+ Saka hamufaniri kuzvisvibisa nezvisikwa chero zvipi zvazvo zvinofamba panyika zvakawanda. 45 Nekuti ndini Jehovha akakubudisai munyika yeIjipiti kuti ndive Mwari wenyu,+ munofanira kuva vatsvene,+ nekuti ini ndiri mutsvene.+ 46 “‘Uyu ndiwo mutemo pamusoro pemhuka, zvisikwa zvinobhururuka, zvisikwa zvese zvipenyu zvinofamba mumvura, uye zvisikwa zvese zvinonanaira panyika, 47 kuti pave nemusiyano pakati pezvisina kuchena nezvakachena, uye zvisikwa zvipenyu zvinogona kudyiwa nezviya zvisingafaniri kudyiwa.’”+
^ Kana kuti “Zvipukanana zvese.”